Ukuveza i-5 Myths Programming Myths - ITS Tech School
5 Kwangathi 2017
Ukuveza i-5 Common Programming Myths
Njengoba isofthiwe ishintsha imisebenzi ezimboni ezahlukene, abahleli bekhompiyutha bafunwa kakhulu kunanoma yisiphi isikhathi kwimemori yakamuva. Ngesikhathi umthuthukisi enamakhono akhethekile, ukuthola imisebenzi ezuzayo ekuhlelweni kunganciphisa kakhulu kunezimboni eziningi ezihlukene, okusho ukuthi bangakwazi ukukhokha ukukhokhela izinzuzo kanye nezinzuzo.
Inganekwane #1: Abahleli be-All Play no-No Work
Izindaba zamatafula we-ping pong namagumbi okudlala ezinkampanini ze-tech zanikeze abathuthukisi ukuthi bazikhohlise ngokukhohlisa. Iqiniso liyakutshelwe, abahleli bavame ukudla amafutha omabili phakathi kwamabili, befika emalungiselelweni omsebenzi ongenalutho.
Inganekwane #2: Abahleli Bonke Umsebenzi No-No
Ngokuthandwa kwabahleli abanobuchule, abaphikelela, abathuthukisi abaphefumula isimo esingapheli njengomthetho bangaqeda umbhangqwana oqhubekayo futhi bathole isiko somsebenzi ophakeme.
Inganekwane #3: Abahleli be-Antisocial
Inganekwane #4: I-Software Yonke Imisebenzi
Isikhathi esiningi njengalezi zilabhulali zingasindisa, abahleli namanje kufanele babe namandla okushintsha ikhodi ukuze bavumelane nomunye wabo wesizinda somusa, ongasidinga njalo amandla amaningi kunokwenza ikhodi kusuka ekuqaleni.
Inganekwane #5: Abahleli be-Math Geniuses
Ngesinye isikhathi, abantu abaqashiwe abahleli njengabafundi bezazi zezibalo. Eqinisweni, ukuqamba ikhodi kusuke kungekuhlangenwe nakho nezinkampani ezithatha esikoleni esiphakeme nesikole. Yiba ngangokunokwenzeka, izibalo ezisekelwe ezihlukahlukene zinganikeza isakhiwo esimangalisayo sokwenza ikhodi.
Abahleli bangaba ochwepheshe abanamathela kakhulu kunoma yiliphi ibhizinisi. Kunoma yikuphi, nabo banomsebenzi owanelisayo obanika isikhathi esiningi sokuphumula, futhi. Uma beka amakhono abo bese bakha kabusha ukuvuselela okumangalisayo, bangakwazi ukubiza amazinga akhokhelwayo amahle kanye nama-liven enza konke umsebenzi okhuthele kahle, naphezu kwayo yonke inkathazo.
Inquisitive mayelana nezinhlelo? Kungani ungakhethi ulimi lwezinhlelo ukuze ufunde kuqala!
Izitifiketi Eziyigugu Kakhulu Kwenziwe Umsebenzi Wokwemvelo